၂၀၁၆ ဂရိတ်ဗြိတိန်မုန့်ဖုတ်မှု: သူတို့ဘယ်မှာလဲ။ - သတင်း
၂၀၁၆ ဂရိတ်ဗြိတိန်မုန့်ဖုတ်မှု: သူတို့ဘယ်မှာလဲ။
ထိုအချိန်သည်အေးခဲလာပြီးသင်သည်သင်၏ညနေခင်းတွင်ခြေထောက်တက်ခြင်း၊ cuppa ရှိခြင်းနှင့်လုံးဝဖြစ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သောအချိန်ဖြစ်သည်။ Great British Bake Off ကိုစွဲလမ်း ။
ယခုနှစ်ပြဇာတ်သည်လူအများဒေါသထွက်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည် Manon ကိတ်မုန့်တစ်ပတ်အတွင်းလှည့်စား နှင့် Noel ရဲ့ဆံပင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ ?
Bake Off အသစ်သည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းဘီဘီစီခေတ်ကာလနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်ပြောပြရန်မခဲယဉ်းပါ Mary Berry ဟာဇာတ်လမ်းတွဲတိုင်းမှာကျဆင်းနေတယ် နှင့် Mel နှင့် Sue ၏ကျော်ကြားသော innuendos ။
သို့သော် ၂၀၁၆ Great British Bake Off 2016 မှပြိုင်ပွဲဝင်များသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။ အဆိုပါစီးရီးဘယ်မှာ pouty Candice အနိုင်ရရှိခဲ့သည် လူတိုင်းကျော်ကျော် swooned လှပသော Selasi ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ဘာလုပ်နေလဲ။ သူတို့မုန့်ဖုတ်ကိုဆက်လုပ်ခဲ့သလား၊
Candice ကလက်ချည်းပဲ ဗြိတိသျှမုန့်ဖုတ်ပွဲကိုအနိုင်ရသည့်အပူဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ။
ငါချစ်သောသွေးထွက်နေသော @jameslakelandltd ကို ၀ တ်ဆင်ထားသောအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလွန်ချောကလက်သော @magnum ပွဲသို့အနည်းငယ်မျှပြန်ပစ်လိုက်သည် !!!
မျှဝေသည် Candice ဘရောင်း 5:08 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 23, 2018 ရက်တွင် (@candicebrown)
သူမဘဝသည်သတင်းစာများ၊ အစားအစာပွဲတော်များနှင့်မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဂရိတ်ဗြိတိန်မုန့်ဖုတ်ကိုအနိုင်ရရှိပြီးနောက်နေထိုင်ရန်ငွေရလမ်းမကောင်း!
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က Candice အတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူမသည်ပေါလုဟောလိဝုဒ်အနမ်းဖမ်းမိခဲ့သည် ဗြိတိန်ဆု၏မာနမှာနှင့်ဖြစ်ခဲ့သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစေသောခွေးများကတိုက်ခိုက်သည် ။
ဒီတော့ဒီမှာငါရေခဲပေါ်မှာကခုန်သို့ငါ့လမ်း tiptoeing ငါ !!! ဒီတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးပြပွဲများပြန်ဝင်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန်အခွင့်ထူးခံ !!! ဒါဟာအရမ်းပျော်စရာကောင်းပြီးစိန်ခေါ်မှုပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီကျွမ်းကျင်မှုအသစ်ကိုသင်ယူပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ကတစ်ခါမှမရခဲ့ဖူးတဲ့နည်းတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်မချစ်မိနေတယ်။ !! @themattevers သည်အိပ်မက်မိတ်ဖက်ဖြစ်ပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူလုပ်ပေးခဲ့ရာအားလုံးကိုသင်တို့အားလုံးကိုမစောင့်နိုင်ပါ။ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရပြီးနေ့စဉ်ငါဆက်လုပ်နေ၊ ဦး ဆောင်နေတယ်၊ ​​စကိတ်စီးပြီးပြုံးနေတယ်ဆိုတာသတိရဖို့လိုတယ်။
မျှဝေသည် Candice ဘရောင်း 8:23 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 2, 2018 ရက်တွင် (@candicebrown)
Candice ဟာ Dancing on Ice မှာပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမတာရှည်တာမို့မုန်တိုင်းထန်စေခဲ့တယ် သူမ၏အကမိတ်ဖက် Matt Evers ကိုနမ်းခဲ့သည် ။ ဒီနေရာမှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိပုံရသည် ...
Selasi ကြောင်း icing pump ရပ်တန့်ဘယ်တော့မှမ။
? ပြက်လုံးများ ... ပိုလေးနက်တဲ့မှတ်စုတစ်ခုမှာ @culinaryartsacademyswitzerland မှာကျောင်းသားဥက္ကpresident္ဌအသစ်ကိုသင်ကြည့်နေတာလား။ ဘယ်လိုလဲ? မင်းမေး ကောင်းပြီ၊ ငါဟာတာ ၀ န် ၀ တ္တရားရှိဖို့နဲ့ကျောင်းသားတွေလမ်းလွဲသွားအောင်၊ တန်းတူညီမျှမှုကိုမြှင့်တင်ဖို့၊ ကွန်ယက်တွေတည်ဆောက်ဖို့၊ ပြည်သူတွေရဲ့အသံဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချလောက်တဲ့စာတစ်စောင်ရေးဆွဲခဲ့တယ် ။SelasiForPresident #Obama #Selasi ငါ #Eedation #Housing #CostofLiving # လူမှုရေးလူမှုဖူလုံရေး #Finance #Defence #Healthcare ဆွေးနွေးရန်အစည်းအဝေးခေါ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတစ်ခုခုပျောက်နေသလား ငါလူများ၏သာ။ ကောင်း၏အဘို့အကြှနျုပျ၏အခမဲ့အချိန်ပေးခြင်းလား? ။ အိုးကျွန်ုပ်အခမဲ့ကော်ဖီရရှိသည်။ စန်း ?? အခုတော့ #IamDelegatingEverything ဆုလာဘ်ကျောင်းသားသမ္မတ၏ အခန်းကဏ္’sကို ဘာလဲ ? အိုးငါစာမေးပွဲအားလုံးနောက်ဆုံးသက်တမ်းအောင်။ ?
မျှဝေသည် SELASI 8:39 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 11, 2018 ရက်တွင် (@selasigb)
ဆလာစီသည်ဆွစ်ဇာလန်ရှိအချက်အပြုတ်အနုပညာအကယ်ဒမီတွင်သူ၏ Instagram တွင်ပြသထားသောအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးကိတ်မုန့်များကိုဖုတ်ခြင်းတွင်အလွန်အလုပ်များခဲ့သည်။
သူကမုန့်ဖုတ်မှာ whiz ပေမယ့်သူသည် လန်ဒန်မာရသွန်ပြီးစီးခဲ့သည် နှင့် Vita Coco ၏သံအမတ်ကြီးဖြစ်သည်။
လေးချက်။ ၁။ အကောင်းဆုံးလူစုလူဝေး (အထူးသဖြင့်ဒီအပူကြောင့်ငါတို့ကိုတကယ်ပဲသယ်ဆောင်လာခဲ့တာ) ။ ငါနင်ကောင်လေးတွေကိုချစ်လား ၂) ငါဆော်နာမှာလေ့ကျင့်သင်ကြားသင့်တယ်။ ၃) ယနေ့ညငါဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ငါ့ပျံသန်းမှုကိုမြန်မြန်ပြေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ 4) အစောပိုင်းကငါပြောခဲ့ဖူးတယ်၊ တွားသွားခဲ့၊ လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်၊ ပြေးခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါပြီးအောင်ပြီးနာကျင်မှုကိုပြုံးပြသွားမှာပါ ?? ‍♂️ ?? ။ ဒီအခက်ခဲဆုံးကတော့အထူးသဖြင့်ဒီအပူမှာပဲ။ ငါပြီးသွားတာကို ၀ မ်းသာပါတယ်။ ပထမဆုံးမာရသွန်ကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်လက်စသတ်ပါဝမ်းမြောက်။ ဆောင်းရာသီမာရသွန်မဟုတ်ရင်ရိုးသားဖို့တောင်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ရင်အခြားမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ခဏဝင်မယ်မထင်ဘူးလား။ ‍♂️? …အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ထောက်ခံမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အရမ်းကောင်းပါတယ်၊ နိမ့်ကျတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော့်နာမည်ကိုအော် ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာကိုရပ်တန့်ပြီးဘုရားသခင်ကိုပြေးခိုင်းတာလို့ပြောတယ်။ #BossyFans ဒါပေမယ့်အများကြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာ? ။ အိုးမိုမိုနဲ့ Sir အထက်တန်းလွှာနောက်ကသိပ်မဝေးပါဘူး။ ကံမကောင်းစွာပဲ 30mins အချိန်: ငါ့ 4hr hit မဟုတ်လော ငါအသည်းအသန် finish ကိုလိုင်းတွားခဲ့သည်အဖြစ်။ ၁၉ မိုင်နံပါတ် ၅း၄၄ အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်လုံးလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်။ အပြေးသမားများနှင့် #BakerDozen အသင်းအားလုံးကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ ငါတို့ဂုဏ်ယူတယ် ?????
မျှဝေသည် SELASI 12:09 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 22, 2018 ရက်တွင် (@selasigb)
ငါ၏အအကြီးဆုံးသောဝမ်းကွဲရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဘာလင်အပြင်ဘက်အံ့သြဖွယ်နေ့ကမနေ့က။ သင်ဂျာကင်ရွေးချယ်မှုအပေါ်မဲပေးဘို့သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်, တော်တော်စတိုင်သတိမပေးသူတစ်စုံတစ် ဦး အဘို့အကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အတူတော်တော်လေး chuffed? ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အရာများမှသင့်အားသိစေမည့်တစ်ခုတည်းသောအချိန် - Etsy (@thefourthbear) မှချစ်စရာကောင်းသော Freskin & Sutherland ၏လက်ဖြင့်ချည်ထားသော၊ @jasperconranstudio မှဂျာကင်အင်္ကျီ၊ ဖိနပ်၊ @ted_baker မှအမေ ဂျာမန်တွေကပါတီကိုဘယ်လိုတက်ရမယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ #wedding #outfit #style #attemptedstyle #summerwedding #cakesmyth #gbbo #pink #SartorialSmyth
မျှဝေသည် အင်ဒရူးစမိုက် 2:38 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 29, 2018 ရက်တွင် (@cakesmyth)
အင်ဒရူးကသူ့ကိုယ်သူအားလုံးကုန်သွယ်ရေး၏ဂျက်အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ သူကအင်ဂျင်နီယာ၊ မုန့်ဖုတ်သမား၊ တင်ဆက်သူဖြစ်ပြီးသူသုံးယောက်စလုံးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါင်းစည်းရန်ပင်ကြိုးစားသည် bakineering အကြောင်းကို YouTube ဗီဒီယိုရိုက်ကူး ။ ဟင့်အင်း၊ ဆိုလိုတာကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။
ဂရိတ်ဗြိတိန်မုန့်ဖုတ်ခြင်းတွင်နောက်ဆုံးပါ ၀ င်သူဖြစ်သောကြောင့်သူသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ရောနှောနေသည်။ ဂျက်အင်ဂျင်တစ်ခုရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုဖုတ်ခြင်း မင်းသား Will သည် Rolls Royce သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရာတွင် Andrew သည်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ယနေ့ #LondonMarathon အားလုံးပြီးစီးခဲ့သူ #bakersdozen အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ဂုဏ်ယူပါသည်။ အရမ်းအားစိုက်ရင်းအားပေးရင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သူတို့ကိုရှာဖို့ကြိုးစားတာအရမ်း ?? အနည်းဆုံး @bakedbybenji, @ravsbansal နဲ့ငါလုပ်နိုင်တာကအပြီးသတ်မှာရောင်းဖို့မုန့်အနည်းငယ်ရောင်းဖို့ပဲ။ ကောင်းပြီ DONE မုန့် ?????? #impressed #gbbo #earnedtheircake
မျှဝေသည် အင်ဒရူးစမိုက် 11:01 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 22, 2018 ရက်တွင် (@cakesmyth)
အကယ်၍ သင်သည် Bake Off ကြယ်အချို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိုပါကလန်ဒန်မာရသွန်သည်ယခုနှစ်တွင်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်မာလာသုန်သည် Selasi ကဲ့သို့မာရသွန်ပြေးရန်မဟုတ်ဘဲ Andrew Ormand လမ်းဆေးရုံသို့လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်သူ၏ကိတ်မုန့်များကိုရောင်းချခဲ့သည်။
ငါ @yeovilshow အတွက်ဘောလုံးအကြောင်းအရာကိတ်မုန့်ဖုတ်နေကြောင်း @britishbakeoff ဘယ်လိုသိခဲ့သလဲ။ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်၊ နောက်စနေနေ့တွင် Yeovil Show ၌ကျွန်ုပ်၏ကိတ်မုန့်ဆန္ဒပြပွဲများကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။ သင်လက်မှတ်များလိုအပ်ပါက www.yeovilshow.org တွင်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏နွေရာသီ showstopper နှင့်ငါ့ကမ္ဘာ့ဖလား showstopper #bakewithlove #summer #football #worldcup ကြည့်ရှုလိုလျှင်ငါ 11am နှင့် 1pm မှာမိပါတယ်
မျှဝေသည် Val ကျောက်ခဲ 12:48 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 7, 2018 ရက်တွင် (@ valcake.walks)
ယခင်ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဗဲလ်သည် ၂၀၁၆ Great British Bake Off ပြိုင်ပွဲမှအမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကိတ်မုန့်များနားထောင်ခြင်းမှသူမသည်သူမအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဟုပြောပြပါ။ မတော်တဆ innuendos ။
မုန့်ဖုတ်တွင်နေကတည်းကသူမဖြစ်ခဲ့သည် Ed Sheeran tagging ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်ပို့စ်များကိုတင်ခြင်း ။
ဒီမှာကိတ်ပြီးသောကိတ်မုန့်ပါ @edsheeran pic.twitter.com/RI58Z9YWRe
- Valerie Ann Stones (@valstones) ဇွန်လ 20, 2017
Ed Sheeran ဟာ Val ကိုချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်ချိန်မှာသူနဲ့အတူတူနေဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။
မျှဝေသည် Benjamin 11:24 pm တွင် PDT မှာမတ်လ 11, 2018 ရက်တွင် (@bakedbybenji)
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး အခြားပြိုင်ပွဲဝင်များအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သူမ၏ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ထွက်မတ်တပ်ရပ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူမသည်ယခုအခါသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပိုမိုပျံ့နှံ့စေပြီး Luminary Bakery ရှိလန်ဒန်ရှိချို့တဲ့သောအမျိုးသမီးများအားမုန့်ဖုတ်ခြင်းကိုသင်ကြားပေးသည်။
သူအားလပ်ချိန်၌သူသည် Food Stylist တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်သူမရဲ့ Instagram ဟာမီးလောင်နေပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော @Ottolenghi ကိုထုတ်ဝေခြင်းမင်္ဂလာရှိသောနေ့။ ငါသည်သူ၏အသစ်သောစာအုပ်, ရိုးရှင်းသောကနေချက်ပြုတ်ခဲ့ကြ, ထိုသို့တကယ့်အလှတရားပါပဲ။ အရသာနှင့်ပြည့်ဝ၏ရိုးရှင်းသော, ဖန်တီးမှုချက်ပြုတ်နည်းများ။ အထူးသဖြင့်ခရမ်းချဉ်သီးများနှင့်ဒိန်ချဉ်ကိုငါနှစ်သက်သလား။ #ottolenghisimple
မျှဝေသည် Benjamin 10:43 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာလ 6, 2018 ရက်တွင် (@bakedbybenji)
အဖွဲ့၏မိခင်နှင့် Bake Off ဆန်ကာတင်နောက်ဆုံးဂျိန်းသည်ခက်ခဲသောနှစ်နှစ်ကြာသည်။
ပြီးပြီ လမ်းလျှောက်လို့မရဘူး၊ လှေကားကအပြည့်မရှိဘူး! ဒါပေမယ့်ငါသွားပြီနှင့် @londonmarathon ပြီးအောင်ငါကအစာရှောင်မဟုတ်ခဲ့တော်တော်လေးမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ငါ့အတံဆိပ်ရရှိပါသည်နှင့်ရေပုံးစာရင်းထဲကကို tick ။ လူအစုအဝေးလုံးဝကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့ကြသည်။ စိတ်ကူးနေ့ !! #marathon #running #bakersdozen
မျှဝေသည် ဂျိန်းဘိဒယ် 11:16 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 22, 2018 ရက်တွင် (@janebbakes)
ဂျိန်းရှာတွေ့ခဲ့သည် သူမ Bake Of မတိုင်မီအရေပြားကင်ဆာရှိခဲ့သည်fသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြန်လာနိုင်သောကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရမည်။
သူမ၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုအတွက်မုန့်ဖုတ်ခြင်းအပြင်ဂျိန်းသည်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုဖန်တီးကာသူမ၏ဘလော့ဂ်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ထည့်လေ့ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအရာ? သူမသည် Val နှင့်သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေထက်စနေဘာတနင်္ဂနွေကိုသုံးတာပိုကောင်းတာလဲ @loubarada နှင့် @ valcake.walks တို့နှင့်အတူ Marden Kent @redrowhomes တွင်ဤတွင်ညနေ ၃ နာရီမရောက်မှီသူတို့၏အရသာရှိသောအစားအစာအချို့ကိုမြည်းစမ်းပါလိမ့်မည်။ #cake #delicious #friends
မျှဝေသည် ဂျိန်းဘိဒယ် 4:15 pm တွင် PDT မှာမတ်လ 31, 2018 ရက်တွင် (@janebbakes)
သက်သတ်လွတ်စားသူမဟုတ်သောသက်သတ်လွတ်။ ရှုပ်ထွေး? ကိုယ်လည်းပဲ။
နောက်ဆုံးတော့ #cronut ရှိခဲ့ရင်ငါမျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုကောင်းတယ်။ ကုမ္ပဏီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ @bakedbybenji
Lil Kim သူမ၏အစာအိမ် pumped ရှိသည်ပြုလေ၏
မျှဝေသည် Rav Bansal 6:08 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 9, 2016 ရက်တွင် (@ravsbansal)
သူသည် Great British Bake Off 2016 တွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့စဉ်က Rav သည်သက်သတ်လွတ်စားသူများအကြားရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုအပင်အခြေပြုအစားအစာရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
အခြားပြိုင်ဖက်များကဲ့သို့ပင် Rav's Instagram သည် Great British Bake Off ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့သောအံ့သြဖွယ်ကိတ်မုန့်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သူလည်းအနည်းငယ်ပြုသောအမှုဖွင့် မိမိအလူမျိုးရေးခွဲခြားအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်။ အင်တာဗျူးများ နှင့်မုန့်ဖုတ်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။
မင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့် ?? ကွဲပြားခြားနားသောအရသာ ၃ မျိုး - အောက် - ချောကလက်အလယ် - Papaya, Coconut & Passionfruit Top- Chai & Ginger ။
မျှဝေသည် Rav Bansal 12:08 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 24, 2018 ရက်တွင် (@ravsbansal)
သူသည် Great British Bake Off မတိုင်မီငွေရှာခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်လပေါင်းများစွာမေးမြန်းခံရပြီးနောက် 'မင်းကပြသနေတာလား' လို့မေးတယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ထုတ်ဖေါ်နိုင်! ငါမဟာဗြိတိန်မုန့်ဖုတ် ON AM !!!! ငါစိတ်လှုပ်ရှားစရာကျော်လွန်ပြီးတကယ်ပြောစရာစကားလုံးတွေမရှိဘူးလား။ #gbbo #amidreaming #whatafeeling
မျှဝေသည် Michael Georgiou (@ michaelgeo96 @) အားသြဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မိုက်ကယ်အကြောင်းကိုပြောစရာအများကြီးမရှိပါဘူး။ သူသည်ပေါင်ဟောလိဝုဒ်၏ပေါင်မုန့်ဖုတ်စွမ်းရည်ကိုသဘောမကျကြောင်းထင်ရှားသည်။ သူသို့သော် အွန်လိုင်းချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်မုန့်ဖုတ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုတောင်မှပြသခြင်းမပြုမီကြီးမားသောငွေပမာဏကိုပြုလုပ်ပါ ။ ယခုသူသည်မိမိကိုယ်ကိုအိမ်သူအိမ်သားစားသူနှင့်အပျော်တမ်းအပြေးသမားအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်၊ လာမယ့်ဟာကိုမင်းသိတယ်။ သူလန်ဒန်မာရသွန်ပြေးခဲ့တယ်။
26.2 မိုင်ပြီးပြီ @LondonMarathon ✅! တစ်ရက်ပဲ! လနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးဂရိတ်လအနည်းငယ် #bakersdozen ! ပြေးလွှားရတာအရမ်းပျော်တယ် @GreatOrmondSt ! ဒီမှာနာမည်ကြီး Michael Bot ပါ @Mr_Mr_Dr ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာငါ့ဆီငှားလာပြီလား။ pic.twitter.com/Z19lLGdwq4
- Michael Georgiou (@ michaelgeo96) ပြီလ 22, 2018
'အရူးနဲ့အမွေးလား မင်းငါ့ကိုအကြောင်းပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ဒီမှာဆိုရှယ်မီဒီယာတိတ်ဆိတ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကဒီစီမံကိန်းကကျွန်တော့်ဘဝကိုလုံးလုံးလွင့်စင်သွားစေပြီးနိုးထရင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အတွေးတွေအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။ ဟယ်ရီကရပ်နေသောသကြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစားပွဲသည်ဟယ်ရီ၏ကိတ်မုန့်ကိုဖုတ်သည်။ ကျွန်ုပ်အလုပ်ပြသထားသောအမှန်တကယ်ထွင်းထားသည့်စားပွဲ၏ပုံတူဖြစ်သည်။ အပူချိန် ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ကျော်လွန်၍ ဖန်တီးရန်ကြိုးစားရာ၌၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ပြီးမြောက်မည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ခဲ့ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကိတ်မုန့်အလှဆင်ခြင်းကိုဘယ်သောအခါမျှပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ဟုကြေငြာ။ မျက်ရည်ကျခဲ့ရသည်။ အဲဒါကိုပို့ပြီးတဲ့နောက်တစ်ပတ်အကြာမှာကျွန်မပြန်ကောင်းလာပြီး 'Cakezilla' အဖြစ်ပြောင်းလဲလာပြီးဘာကိုခန့်မှန်းလို့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကငါ့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီလဲ။ ကျမနောက်စီမံကိန်းကတော့မီးဖိုဖုတ်နေတာပဲ။ #cakeecorating #cakeart #icing #sugarcraft #harrypotter #harrypottercake #hagrid #hagridcake #potterhead #potterheads #harrypotterfan #harrypotterfans # Hogwarts # ကော်စကိတ် #fondantcake #edibleart # ကိတ်ကိတ်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံ: စတိဗ်အဒမ်ဓါတ်ပုံ၊
မျှဝေသည် ကိတ် Barmby 12:33 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 11, 2018 ရက်တွင် (@katebarmby)
Kate သည် Great Great Bake 2016 2016 ကိုသင်စဉ်းစားသောအခါစိတ်ထဲတွင်ရှိသည့်လူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သူမစတုတ္ထပတ်တွင်သူမအနေဖြင့်စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည်စာနယ်ဇင်းဆရာ၊ ဆရာမနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးစာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး Hagrid ကိတ်မုန့်ကိုကြည့်လိုက်သည်။ သူမသည်ကြောင်းကိတ်မုန့်နှင့်အတူအနိုင်ရပြပွဲရှိသည်မယ်လို့ !!!!
မင်းကမင်းကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံတယ်ဒါပေမယ့်ငါအကောင်းဆုံးလူတွေအားလုံးကိုမင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုငါပြောပြမယ်။ ဒီကြီးမားတဲ့ကိတ်မုန့်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတဲ့အခါငါတံခါးကိုဖြတ်ပြီးမကိုက်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ အဲဒီနောက်မှာခုန်ပေါက်ပြီးခရီးဆက်ပြီးနောက်အရေးပေါ်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်၊ စားပွဲပေါ်မှာအလုံအလောက်မရှိဘူး။ အရာရာတိုင်းပြီးတာနဲ့ငါဟာပျက်ဆီးမှုနည်းနည်းပဲလို့ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဒီပြဇာတ်တွေအားလုံးကိုကြည့်နေတုန်းပဲ၊ ဒီ post-repair ဓါတ်ပုံတွေမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းလူတိုင်းပျော်ရွှင်နေတုန်းပါပဲ။ #aliceinwonderland #madhatter #madhattercake #timburton #gbbo #sugarcraft #cakedecorating #cakeart #icing #icingonthecake #hatcake #teapotcake #spongecake
မျှဝေသည် ကိတ် Barmby 11:55 pm တွင် PDT မှာဇွန် 18, 2018 ရက်တွင် (@katebarmby)
သူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲအစစ်အမှန်ကတော့သူမရဲ့ Gingerbread ထက်အများကြီးပိုအောင်မြင်ပါတယ်။
@ valcake.walks နှင့်ယနေ့သေနတ်ပစ်ခြင်းတွင် #claypigeons # baking #friends #gbbo #countrylife #funnymemes
မျှဝေသည် Louise Williams 10:34 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2018 ရက်တွင် (@loubarada)
Country မိန်းကလေး Louise သည်သူမ၏ဗြိတိသျှမုန့်ဖုတ်မုန့်ကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီးသူမ၏ gingerbread မင်္ဂလာပွဲပြိုကွဲချိန်တွင်မာရိနှင့်ပေါလ်တို့အားမပေးမီကဖြစ်သည်။ ပြပွဲကတည်းက Louise Val နှင့်အတူအချိန်တိုင်းနီးပါးနေခဲ့ရသည်။ သူတို့ဟာခင်မင်ရင်းနှီးမှုဟာအတူတူမုန့်ဖုတ်တဲ့အခါအသန့်ရှင်းဆုံးပါပဲ Val သည် Louise ၏မင်္ဂလာဆောင် #friendshipgoals တွင် even ည့်သည်တစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သည်
လူမှုမီဒီယာတွင်မကြာမီခရစ်စမတ်သည် @ valcake.walks @loubarada နှင့် @redrowhomes red.co.uk/festivebakes # baking # videoclip #cristmastime
မျှဝေသည် Louise Williams 2:05 pm တွင် PST မှာဒီဇင်ဘာလ 9, 2017 ရက်တွင် (@loubarada)
မင်း Lee ကိုမှတ်မိသေးလား ငါတကယ်မကျင့်သောကြောင့်။
#churros နှင့် #chocolate တို့သည်အရသာရှိလှသည်။ ငါ #gbbo တွင်သူတို့ကိုဖုတ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့လိုလျှင်
မျှဝေသည် Lee Banfield 2:48 pm တွင် PDT မှာမတ်လ 29, 2017 ရက်တွင် (@leesbakes)
Lee သည် Great British Bake Off 2016 ကိုစွန့်ခွာခဲ့သည့်ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူ့ကိုမမှတ်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူဟာအချိန်တွေများစွာချဲ့ယူပြီးဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေတုန်းသူဟာမုန့်ဖုတ်နေတုန်းပါပဲ။
ယနေ့ငါတို့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကဖီးအတွက် Pavlova ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ #gbbo #pavlova #tasty
သမ္မတ 2016 အတွက်မဲအတွက်ရယ်စရာရေးလိုက်ပါ
မျှဝေသည် Lee Banfield 12:03 pm တွင် PST မှာမတ်လ 5, 2018 ရက်တွင် (@leesbakes)
သူကဆဲ Hipster Picnics ရှိပါသလား?
ဒါကမာနကြီးတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ 4:26:42 အပူဆုံး @londonmarathon ပေါ်မှာ။ သင်တန်းများ #bakersdozen ထက်ပိုကောင်းတဲ့အဘို့တောင်းလျှောက်နိုင်ဘူးသော်လည်းငါ၏အအသင်းဖော်ငါ့ကိုအားလုံးသွားအောင်အရာခဲ့ကြသည်! @greatormondst အတွက်ကျွန်ုပ်၏ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိရန်ကူညီပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။ ။ ။ #london #londonmarathon #baker #gbbo #rub #running #runner #marathon
မျှဝေသည် Tom Gilliford 11:22 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 22, 2018 ရက်တွင် (@tomgilliford)
Tom လုပ်ခဲ့တယ် တော်တော်ရယ်စရာမုန့် ဂရိတ်ဗြိတိန်မုန့်ဖုတ်ချိန်၌သူနေထိုင်စဉ်ကယခုသူ၏ Instagram တွင်သူ၏အပြည့်စုံဆုံးမုန့်များကိုပြသသည်။
ဒီတော့ @LNER ဤရထားနှောင်းပိုင်းတွင် ၀ င်ရောက်နေပြီဟုတောင်းပန်။ မရ။
- သောမတ်စ်ဂယ်လီဖord❄️ (@Tom_gilliford) သြဂုတ်လ 27, 2018
• Bake Off မှ Liam သည်ဤတနင်္ဂနွေနေ့ Sheffield တွင်ဒုတိယနှစ်အိမ်၌ကျင်းပသောပွဲတွင်ဖြစ်သည်
• ဆရာ ၀ န်ကိုကူညီပါ။ နို ၀ င်ဖီးလ်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ
• Bake Off တဲအတွက် Viper မှာ DJ စုံကိုလဲလှယ်သူ Luke Thompson နဲ့တွေ့ဆုံပါ